Uganda oo War kasoo saartay Go'aan uu Soomaaliya ka qaatay Mareykanka - Awdinle Online
Uganda oo War kasoo saartay Go’aan uu Soomaaliya ka qaatay Mareykanka
Walwal weyn ayuu ku abuuray ciidamada Midowga Afrika ee nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Soomaliya bisha soo socoto oo ay rumaysan yihiin in ay fursad cusub oo ay isku soo abaabulaan ay u noqon doonto dagaalamayasha Al-Shabaab.
Afhayeenka ciidamada Uganda Flavia Byekwaso ayaa u sheegtay Jariidada Daily Monitor in ka bixitaanka ciidamada Mareykanka uu abuuri doono xaalad amni oo hor leh.
“Waa wax laga xumaado in qorshahaani uu yahay mid si dhaqsi ah ku dhacaya” ayay tiri Flavia Byekwaso, waxa ay hadalkeedi ku sii dartay in ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya ay sameyn ku yeelan doonto dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, balse Midowga Afrika ciidamda ka jooga Soomaaliya ay u dhaqaaqi doonan in dulduleeladaasi amni ee ku soo furmay ay si dhaqsi ah ku buuxiyaan.
Flavia Byekwaso ayaa u sheegtay Daily Monitor in wadamada ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya sida Uganda,Burundi, Ethiopia, Djabuti iyo Kenya laga doonayo inay la yimaadan buuxinta doorkii ciidamada Mareykanka ee dalka ka baxaya bilowga sanadka 2021-ka.
Flavia Byekwaso ayaa tiri ” Goor dhow waxaan rajeenaynaa inaan aragno ciidamadeena oo u dhaqaaqay sidii ay u buuxin lahaayen doorkii Ciidamada Mareykanka”.
Previous articleDigniino hor leh oo loo jeediyey dhinacyada siyaasadda Soomaaliya
Next articleMaxkamadda Ciidamada oo xukun ku riday rag ka tirsan Kooxda Al-Shabaab